Sababaha heshiiska Gareth Bale ee naadiga Jiangsu loo joojiyay - Bandhiga Media
Sababaha heshiiska Gareth Bale ee naadiga Jiangsu loo joojiyay
Press room July 29, 2019
U dhaqaaqistii Gareth Bale ee uu ugu dhaqaaqi laha kooxda ka ciyaarta horyaalka Shiinaha Jiangsu Suning ayaa lagu soo waramayaa inuu istaagay sababa la xiriirta qoyskiisa inay ka gaabsadaan inay noloshooda ku qaatan Shiinaha.
Zinedine Zidane, aya u arka wiilka reer Wales inuu yahay mid wax dheeri ah kuso kordhin karin Real Madrid, ayaa si cad u sheegay horaantii isbuucaan in Bale ay wacnaan laheyd inuu ka tago kooxda.
Sida laga soo xigtay The Evening Standard, soo jeedinta Bale ee Shiinaha ayaa la diiday ka dib markii lammaanihiisa ay u sheegtay sida ay uga walwalsan tahay sida ay noqon kareyso qoyskooda hadii ay u guuran wadanka dhaca Aasiya.
Bale wuxuu leeyahay seddex caruur ah oo da’doodu u dhaxayso lix jir iyo hal jir, wuxuuna ku raaxeysanayaa cimilada iyo qaab nololeedka Spain oo ay weheliso u dhawaanshaha Wales, halkaas oo isaguna uu guri ku leeyahay.
Kooxda Jiangsu ayaa rajeynaysay inay si bilaash ah kula soo wareegan Bale, laakiin Los Blancos ayaa 20 milyan ginni dalbaneysa iyado 30 jirkani ay kula soo wareegeen 85 milyan ginni sanadkii 2013.